१४ तस्विरमा हेर्नुहोस् कुवेतमाथि नेपालको शानदार जित, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
तस्विरः रमन शिवाकोटी
काठमाडौं। सिंगापुरमा जारी आईसीसी टी–ट्वान्टी विश्वकप छनोट अन्तर्गतको एसिया फाइनलको तेस्रो खेलमा नेपालले कुवेतमाथि सहज जित हात पारेको छ। ईण्डियन एसोसियसन क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा नेपालले ७ विकेट हराएको हो। कुवेतले दिएको १४२ रनको लक्ष्यसहित नेपालले जवाफी ब्याटिङ उत्रेको नेपालले १५.५ ओभरमा मात्र ३ विकेट गुमाएर पुरा गर्यो।
कुवेतविरुद्धको जितमा कप्तान पारस खड्काले उत्कृष्ट ब्याटिङ गरे। उनले ६८ रनको अर्धसतकीय पारी खेले। पारसले ४२ बल खेलेर ११ चौका र १ छक्का प्रहार गरे। यस्तै शरद भेषवाकरले ३० बलमा ३८ रन बनाएर नटआउट रहे भने ज्ञानेन्द्र मल्ले १९ रन बनाए। कुवेतका लागि कप्तान मुहम्मद काहिफले ३ विकेट लिए।
यसअघि टस हारेर कुवेतले पहिले ब्याटिङ गरेको कुवेतले निर्धारित २० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर १४१ रन बनाएको थियो। कवेतका लागि कप्तान मुहम्मद काशिफले सर्वाधिक ४९ रन बनाएका थिए। उनले ३६ बलमा २ चौका र ४ छक्का प्रहार गर्दै नटआउट रहे। यस्तै अदनान इदरिसले २५ तथा मोहम्मद अस्लामले २३ रन बनाएर आउट भए।
नेपालका लागि सन्दिप लामिछाने र बसन्त रेग्मीले ३–३ विकेट लिए। यस्तै करन केसीले २ तथा अविनाश बोहोराले १ विकेट लिए। जितसँगै नेपालको ग्लोबल छनोटमा पुग्ने सम्भावना बलियो भएको छ। आइतबार हुने सिंगापुरसँगको खेलमा जित निकाल्न सके नेपाल विजेता हुदै ग्लोबल छनोटमा पुग्नेछ। सिंगापुर ५ अंक सहित तालिकाको शिर्ष स्थानमा रहेको छ भने नेपाल ४ अंक सहित दोस्रो स्थानमा रहेको छ।